Xulalka Switzerland iyo England yaa maanta ku guuleystay kulankii kaalinta saddexaad ee Uefa Nations League? – Gool FM
Xulalka Switzerland iyo England yaa maanta ku guuleystay kulankii kaalinta saddexaad ee Uefa Nations League?
Haaruun June 9, 2019
(Yurub) 09 Juunyo 2019. Xulalka Switzerland iyo England ayaa wada ciyaaray kulanka kaalinta saddexaad ee koobka Uefa Nations League, waxaana kulan la isku daalay kaddib rigooreyaal ku adkaaday xulka saddexda Libaax.
Kulankan ayaa qeybtii hore ku soo idlaaday barbaro goolal la’aan ah, inkastoo labad dhinac ay sameeyeen fursad goolal loo filan karay.
Markii dib la isugu soo laabtay qeybtii labaad ee kulankan kaalinta saddexaad, daqiiqaddii 84-aad waxaa gool la yimid xulka England waxaana u dhaliyey Callum Wilson, balse goolkaas muuqaal caawiyaha garsoorka ee VAR ayaa diiday kuna tilmaamay garab-dhaaf ama offside.
Markii uu soo dhammaaday waqtigii caadiga ahaa ee kulankan, waxaa loo baahday in ciyaarta lagu kordhiyo 30 daqiiqo oo dheeri ah si labada xul loo kala saaro, balse waa ku kala bixi waayeen 120 daqiiqo, waxaana ay ciyaartu ku soo dhammaatay 0-0.
Intaas kaddib garsooraha ayaa u dhigay labada xul ee Switzerland iyo England inay ku kala baxaan gool ku laadyo ama rigooreyaal, waxaana ku adkaaday xulka saddexda Libaax ee England 6-5 gool ku laadyo ah.
Xulka qaranka England ayaa sidaas ku galay kaalinta saddexaad ee koobka Uefa Nations League, halka Switzerland uu galay kaalinta afaraad, waxaana caawa kala bixi doona labada xul ee Portugal iyo Holland oo la ogaan doono midka koobka ku guuleysta iyo kan kaalinta labaad saldhigta.
"Inkastoo aan qaadannay xilli ciyaareed xun, hadana Barcelona isku mid baanahay” - Roberto Carlos